သင်၏နောက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမည်သူတည်ဆောက်မည်နည်း။ | Martech Zone
သောကြာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 28, 2018 သောကြာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 28, 2018 Douglas Karr
ငါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ငုပ်ဖို့စိတ်အားထက်သန်သူတစ် ဦး အကူးအပြောင်းဝါရင့်နှင့်အတူယနေ့အလွန်ကြီးစွာသောစကားပြောဆိုမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ အငယ်တန်းလျှောက်ထားသောကြောင့်သူစိတ်ပျက်ခဲ့သည် Front-end developer ဒေသတစ်ခုလုံးတွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရှိသော်လည်းအရည်အချင်းမရှိ၊ ငါပြtheနာကသူ့အရည်အချင်းတွေမဟုတ်ကြောင်း, ထိုပြindustryနာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းရှုပ်ထွေးမှုများခဲ့ကြောင်းသူ့ကိုအားပေးခဲ့တယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုလုံးလုံးမှာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံဥာဏ်တွေ၊ တိုးတက်မှု၊ သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံတွေအတွက်သုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်ဒီဇိုင်း၊ စမ်းသပ်မှု၊ ထုတ်ကုန်ရဲ့အင်္ဂါရပ်တွေကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဦး စားပေးဖို့၊ -end developer နှင့်ပင်ဒီဇိုင်နာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်တွေ့ရသည့်စိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများစွာသည်ဝေါဟာရများသည်မရေမရာဖြစ်နေပြီးဖော်ပြချက်များသည်မကြာခဏထပ်နေသည်။
သူသည်အငယ်တန်းရှေ့တန်းဖွံ့ဖြိုးရေးအလုပ်သည်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းတည်ဆောက်ရေး ၀ ဘ်ဆိုဒ်များအတွက်ကောင်းမွန်သောအချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဟုသူထင်ခဲ့သည်။ သူသည်သုံးစွဲသူများ၏ရူပဗေဒနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများနှင့်ရှေ့တန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ငါအမှန်အကန်ပြောရရင်သူတို့ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုပြန်လည်ဒီဇိုင်းဆွဲရန်ရှေ့ပြေးတီထွင်သူတစ်ယောက်မှမည်သူ့ကိုမျှငှားရမ်းသည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ကုမ္ပဏီကြီးများအတွက် web application အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံများကိုပုံမှန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်သည့်အလွန်အာရုံစိုက်သောအနေအထားဖြစ်သည်။
မည်သည့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း Websites များကိုတည်ဆောက်ပါသလဲ။
၀ က်ဘ်ဆိုက်အသစ်တစ်ခုလိုအပ်တယ်လို့မင်းယုံကြည်တယ်။ မင်းငါ့ကိုငှားလား web developer ပါ? မင်းငါ့ကိုငှားလား ဝဘ်ဒီဇိုင်နာ? မင်းငါ့ကိုငှားလား စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတိုင်ပင်ခံ? ဘယ်လိုလဲ SEO အတိုင်ပင်ခံ?
ကုမ္ပဏီများသည်အထက်ဖော်ပြပါအချက်တစ်ချက်နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုသောအခါအဆိုးဆုံးအခြေအနေသို့ရောက်ရှိသွားသည်။ မျှော်လင့်ချက်များမရရှိသည့်အခါစိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်ရပ်။ ငါကအစစ်အမှန်ကမ္ဘာဥပမာအချို့ကိုပေးပါလိမ့်မယ်:
ကျနော်တို့ကငှားရမ်းခဲ့သည် ဝဘ်ဒီဇိုင်နာ။ ဒီ site ကလှတယ်၊
ကျနော်တို့ကငှားရမ်းခဲ့သည် ရေးသားသူ / ပရိုဂရမ်မာ။ ကျနော်တို့ပိုက်ဆံအတော်အတန်သုံးခဲ့ပေမယ့်ဆိုက်ကတော်တော်လေးများပြားလွန်းပြီးအဲဒါကိုအကောင်အထည်မဖော်သေးဘူး။
ကျနော်တို့ကငှားရမ်းခဲ့သည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီ။ ဆိုဒ်အသစ်ကကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်တကယ့်ကိုနှေးတယ်၊ ပြီးတော့အသွားအလာတစ်တန်ကျသွားတယ်။
ကျနော်တို့ကငှားရမ်းခဲ့သည် ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်တံဆိပ်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ site သည်အလွန်ဆိုးရွားပြီးမည်သည့်အရာကိုမွမ်းမံရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိနိုင်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ငှားခဲ့တယ် SEO အတိုင်ပင်ခံ။ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရယခုကျွန်ုပ်တို့ ပို၍ အဆင့်အတန်းမြင့်မားနေသော်လည်း၎င်းသည်နောက်ထပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဦး တည်ခြင်းမရှိသေးပါ။
ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်အသစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရန်ထွက်တိုင်းအချိန်တိုင်းတွင်မျှော်လင့်ချက်သည်အတူတူပင်ဖြစ်သင့်သည်။ သူတို့၏စီးပွားရေးကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးအမြတ်ရရှိခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းသည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုပိုမိုသိရှိလာစေရန်မြင့်မားသောဆွဲဆောင်မှုရှိသော site တစ်ခုသာရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံသင်၏လုပ်ငန်းတွင်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသို့မဟုတ်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာကိုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ အကြိမ်များစွာ, သင့်မျှော်လင့်သည်သင်၏အရောင်းအဖွဲ့ပိုမို ဦး ဆောင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်ပါကပြောင်းလဲမှုများပိုမိုမောင်းနှင်ရန်လမ်းကြောင်းများပိုများလာသည်။
ဆိုက်သည်တုန့်ပြန်မှုရှိပြီးကျွန်ုပ်ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ် (များ) ကိုသူတို့လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေရန်နှင့်ကောင်းစွာရှာဖွေရန်အတွက်ကောင်းစွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ဒီ site သည်မြန်ဆန်ပြီးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအတွက်အကောင်းဆုံးသောအလေ့အကျင့်များကို အသုံးပြု၍ ၎င်းကိုတိကျစွာညွှန်းနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ site တွင်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။ နောင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်များကိုပြောင်းလဲရန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။
ရောင်း ၀ ယ်ခြင်း၊ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ အထောက်အပံ့ပေးခြင်းနှင့်အခြားစနစ်များအကြားအချက်အလက်များကိုရွှေ့ပြောင်းရန်လိုအပ်သောအားထုတ်မှုကိုလျှော့ချသည်။
ဒီ site သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောကျွန်ုပ်တို့၏အစီရင်ခံခြင်းနှင့်ဒိုင်ခွက်များကကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလှမ်းမှုများကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်တိုးတက်အောင်စဉ်ဆက်မပြတ်ကူညီပေးနေသည်။
ဤရည်မှန်းချက်အားလုံးသည်သင်၏ [ဒီမှာထည့်ပါခေါင်းစဉ်ထည့်ပါ] နှင့်အစည်းအဝေးများတွင်မကြာခဏဆွေးနွေးခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်ဖြစ်သင့်သည်။ ပြtalentနာကအခွက်တဆယ်စျေးကွက်ဟာမကြာခဏကျိုးပဲ့နေတယ်။ ငါနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောဖောက်သည်များသည်များစွာသောအတွင်းလူအင်အားနှင့်ပြင်ပအရင်းအမြစ်များကိုဒေါ်လာထောင်နှင့်ချီ။ ကုန်ဆုံးခဲ့ကြပြီးဘယ်သောအခါမျှမတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် အထက်။
အကယ်၍ သင်သည် developer တစ် ဦး သို့မဟုတ်ပရိုဂရမ်မာကိုငှားရမ်းပါက၎င်းသည် developer ၏မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်သူတို့သည်အယ်ဒီတာအလွတ်တစ်ခုဖြင့်စတင်ပြီးသင်တောင်းဆိုထားသောကုဒ်နံပါတ်တိုင်းကိုရေးသားလိမ့်မည်။ ဒီနေ့ခေတ်အရူး ငါစာသားဒေါ်လာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာယူ။ , ဒေါ်လာရာပေါင်းများစွာကုန်ကျဖြေရှင်းချက်များအတွက်ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဖြေရှင်းချက်များအတွက်ပစ်ချပါပြီ။ ငါကဒီပရိုဂရမ်မာကိုအပြစ်မတင်ပါဘူး၊ အဆိုပါပြproblemနာကိုမျှော်လင့်ချက်များအတွက်ကွာဟမှုဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ သင်သည်ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ငှားရမ်းထားပါကသင့်ဆိုဒ်သည်ဗေဒင်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည် hard-code element များကိုလည်းပြုပြင်ရန်မဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်ထားနိုင်သည်။ သူတို့က compressed လုပ်ထားသောပုံရိပ်များကိုသုံးပြီး site ကိုနှေးကွေးစေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်ခဲဖမ်းဆီးခြင်းအတွက်အဖြေတစ်ခုနှင့်အမှန်တကယ်ပေါင်းစပ်။ မရပါ။ တစ်ချိန်ကဖောက်သည်တစ်ယောက်ကသူတို့လှပတဲ့ site အသစ်ကိုလွှင့်ပြီးလအနည်းငယ်အကြာမှာငါ့ကိုဆက်သွယ်ခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့်၎င်းကိုဘာကြောင့်မထုတ်လုပ်တာလဲဆိုတာကိုသူတို့နားမလည်နိုင်ဘူး။ ကူညီဖို့ငါ့ကိုငှားလိုက်တယ်။ မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာသူတို့ဟာပုံစံဟာသက်သက်သာသာဖြစ်ပြီးအချက်အလက်တွေကိုဘယ်နေရာမှာမှမတင်ဘူးဆိုတာတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ သူတို့မှာရာနဲ့ချီတဲ့ ဦး ဆောင်လမ်းပြမှုရှိနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့မှာရှာတွေ့ဖို့နည်းလမ်းမရှိခဲ့ဘူး။ ဒီဇိုင်းအေဂျင်စီသည်သူတို့၏မျှော်လင့်ချက်များကိုပြည့်မီခဲ့သည်။
မကြာခဏဆိုသလိုမတူသည်ထက်, ငါအဖြစ်ရောင်းချ site များကြည့်ရှုပါ စီမံကိန်းများ။ ရလဒ်အနေဖြင့်အေဂျင်စီ၊ ဒီဇိုင်နာ (သို့) တည်ဆောက်သူသည်အချိန်ကုန်သက်သာစေရန်နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအပေါ်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအမြတ်အစွန်းရရန်အတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှဖြတ်လမ်းတိုင်းကိုယူသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်အတွက်ငွေရေးကြေးရေးအရဆုချသည်။ နှင့်အညီ, သင်တန်း, စီမံကိန်းနိမ့်ဆုံး (သို့မဟုတ်နိမ့်လေလံ၏ဘေးတွင်) ကိုသွား။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကုမ္ပဏီများသည်တစ်စုံတစ်ယောက်သည်ဒေါ်လာ ၂၅၀၀၀ တန်ဆိုဒ်တစ်ခုကိုကိုးကားပြီးဒေါ်လာထောင်နှင့်ချီ။ ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်တခါတရံရယ်သည်။ ငါကသူတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဘယ်လိုဖျော်ဖြေတာလဲ၊ တုန့်ပြန်မှုကမကြာခဏဖြစ်တာကိုမေးတယ်။ ငါတို့စီးပွားရေးအများစုကိုလုပ်တယ် ခံတွင်း၏စကားလုံး.
ကောင်းပြီ သင့်ရဲ့စျေးပေါ site ကိုယူတာပဲ။ မင်းပိုက်ဆံတွေချပစ်လိုက်တယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ဒေါ်လာ ၂၅၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါကသင်ငှားရမ်းမည့်အရင်းအမြစ်၏စွမ်းရည်ပေါ် မူတည်၍ သင်၏စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကိုနှစ်ဆတိုးနိုင်သည်။
သင်၏စီးပွားရေးလိုအပ်ချက်များကိုနားလည်ပြီးသင်ရရှိရန်ကြိုးစားနေသောပရိသတ်နှင့်ရည်မှန်းချက်များကိုသုတေသနပြုနိုင်သည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရင်းမြစ်တစ်ခုကိုငှားရမ်းခြင်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာ၊ သုတေသန၊ ဒီဇိုင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ ပေါင်းစည်းမှု၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ ကိရိယာနှင့်ပလက်ဖောင်းများ၏ရှုခင်း၊ ပေါင်းစည်းမှုအပြင်လူမှုရေး၊ ရှာဖွေရေး၊ မိုဘိုင်း၊ ကြော်ငြာ၊ သင်၏အွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလိုအပ်ချက်များအတွက်။
သို့သော်၎င်းသည်ဒီဇိုင်းပညာရှင်လည်းမဟုတ်၊ developer လည်းမဟုတ်ပါ။
ဒီဝါရင့်ကိုငါ့အကြံဥာဏ်? သူဟာဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာဖြင့်ဆေးရုံမှဆင်းခဲ့ပြီးသူ၌ကောင်းသောစရိုက်၊ သူသည်စစ်မှုထမ်းကာလအတွင်းနှင့်ပြီးနောက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသို့ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သွားရောက်ခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်သူ၌ကြီးမားသောစီးပွားရေးကျွမ်းကျင်မှုရှိပြီးမည်သူမျှမတွေ့ကြုံဖူးသောအတွေ့အကြုံရှိသည်။ သူဟာထူးချွန်တဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ဆက်သွယ်ရေးသူတစ်ယောက်ပါ။ သူနဲ့စကားပြောရတာကျွန်တော်ပျော်ခဲ့တယ်။
သူကကုဒ်ရေးပြီးတစ်နေကုန်ဖန်သားပြင်ရှေ့မှာထိုင်လို့မရဘူးလို့ ၀ န်ခံခဲ့တယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူ။ ဒါကငါစွန့်လွှတ်ဖို့သူ့ကိုအကြံပေးပြောမဆိုလိုပါ တိုးတက်ရေးငါသူအဲဒီမှာကျွမ်းကျင်မှုကိုတည်ဆောက်သင့်တယ်ထင်ပါတယ်။ ငါဖွံ့ဖြိုးရေးတစ်တန်လုပ်ပေးပေမယ့်ဘယ်တော့မှမ မျှော်လင့် ငါ၏အဖောက်သည်များ၏။ သူတို့ဟာကုဒ်မဟုတ်ဘဲစီးပွားရေးရလဒ်တွေကိုလိုချင်ကြတယ်။
ကျွန်ုပ်၏စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ဗဟုသုတနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများစွာကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်သူတို့၏အမြင့်ဆုံး ROI ရမည့်နေရာတွင်သူတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ဦး စားပေးသတ်မှတ်နိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးသောဒီဇိုင်နာ၊ အကောင်းဆုံးပြုစုသူ၊ အကောင်းဆုံး SEO ရှာဖွေရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ၊ သင်ရှာဖွေရန်မလိုအပ်ပါ။ လိုအပ်ပါကထိုအရင်းအမြစ်များကိုရှာနိုင်ပါသည်။ သင်၏နောက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတည်ဆောက်ရန်တစ်စုံတစ်ယောက်အားငှားရမ်းသောအခါသင်၏အဓိကပန်းတိုင်မှာသင်၏စီးပွားရေးကိုနားလည်သောသူတစ် ဦး ကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည်ဖောက်သည်များအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုမတည်ဆောက်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပိုင်ဆိုင်မှုများစွာကို အသုံးပြု၍ စီးပွားရေးရလဒ်များကို ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုအပါအဝင်တည်ဆောက်သည်။
Tags: Front-end developeruiဝက်ဘ်ဆိုက်ရေးသားသူဝဘ်ဆိုက်ပရောဂျက်